Wararkii ugu dambeeyay dagaal xooggan oo ka dhacay Galgaduud – HalQaran.com
Wararkii ugu dambeeyay dagaal xooggan oo ka dhacay Galgaduud
Galgaduud (Halqaran.com) – Waxaa faah-faahno dheeraad ah ka soo baxaya dagaal saaka ciidamada DF Soomaaliya iyo maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab ku dhexmaray deegaanka Miirdugul oo Koonfur ka xiga magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud.
Saraakiil ka tirsan Ciidamada dowladda gaar ahaan Guutada 15aad qeynta 21aad ayaa waxaa ay sheegeen in dagaalka kadib ay Al-Shabaab, isaga baxeen deegaanka.
Wararka ayaa sheegaya, in dagaal culus saaka ku dhexmaray deegaanka Miirdugul ciidanka xoogga dalka iyo maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab, waxaana hadda gacanta ku haya deegaankaasi ciidamada DF Soomaaliya.
Dagaalkan ayaa sababay khasaaro kala duwan oo soo gaaray labada dhinac iyo dad shacab ah oo ku sugnaa deegaanka lagu dagaallamay. Waxaana hadda deggan xaaladda deegaanka.
Ciidamada dowladda ayaa lagu soo warramayaa inay dhaq-dhaqaaqyo ciidan oo ay ku baadi goobayaan xubno ka tirsan Al-Shabaab ay ka wadaan duleedka deegaanka Miiradugul ee duleedka magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud.
Tags: Ciidanka Xoogga dalka iyo Al-Shabaab, dagaal, deegaanka Miiradugul, Galgaduud
Dowladda Somaliya oo sheegtay inay dishay xubno ka tirsanaa Al-Shabaab
Madaxweynaha Jubbaland ‘Axmed Madoobe’ oo codsi u diray Xildhibaannada BF Somaliya